﻿ कोरोनासम्बन्धि यस्तो इमेल आउँछ ? सावधान !
कोरोनासम्बन्धि यस्तो इमेल आउँछ ? सावधान !
सोमबार ०८, बैशाख २०७७
काठमाडौं । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिरहेको बेला अरुलाई ठगेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने गिरोह सल्बलाइरहेको छ । इन्टरनेटमा सजिलो शिकारको खोजीमा रहेको यो गिरोहले कोरोनाको महामारीको बारेमा जिमेल प्रयोगकर्तालाई हरेक दिन एक करोड ८० लाख इमेल पठाइरहेको पाइएको छ ।
अपराधीहरुले जीमेल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न प्रकारका इमेल पठाएका हुन्छन् । त्यसमा केही इमेल विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता संस्थाको नामबाट पठाइएको हुन्छ र कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न उक्साइन्छ वा बहाना बनाएर चन्दा मागिन्छ । साइबर अपराधीहरुले केही दिनयता सरकारी संस्थाको नामबाट पनि फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
मोबाइल ह्याक भए–नभएको कसरी थाहा पाउने ?